Iindaba -Usikhetha njani isitayile se-pepper grinder kunye nomthamo
Ungayikhetha njani isitayile se-pepper grinder kunye nomthamo
Ipepile inokuthiwa sisinongo esibaluleke kakhulu kwiitya ezininzi. Ukuba une-grinder eluncedo ye-pepper, unokusebenzisa ngokulula ipepile entsha engaphezulu ukongeza incasa kwizitya zakho. Ungazikhetha njani iimilo ezahlukeneyo kunye namandla?
Ubume besingqisho sepepile
1. Uhlobo lwesandla sokujija
Abantu abathanda ukupheka bayasithanda isandi esimnandi xa ipepile isemhlabeni kunye nevumba eliza nayo. Kuyinto enobungcali ukusebenzisa! Nangona kunjalo, olu hlobo lwe-grinder ye-pepper kunokuba nzima ukuyijikeleza ngenxa yokungafani koyilo okanye ubungakanani. Ukuba izandla ziyamtyibilika okanye zinamafutha ngexesha lokupheka, iyakwandisa ubunzima bokusebenza ngenxa yokutyibilika;
2. Uhlobo lokucinezela ngesandla esinye
Isebenza kakhulu ngokucinezela izibambo kumacala omabini kwicala elingasentla, okanye ucofe amaqhosha; inokusetyenziswa ngesandla esinye, elula kakhulu. Kwangelo xesha, zininzi iindlela ezinomdla onokukhetha kuzo. Nangona kunjalo, imali enokusiliwa ngexesha ihlala incinci, kwaye kufanelekile ukuba isetyenziswe etafileni njengesidlo esecaleni xa kuthelekiswa nekhitshi efuna isinongo esikhulu.
3. Uhlobo lombane
Cofa iswitshi ukuze usile ipepile ngokuzenzekelayo, kwaye inokusebenza ngesandla esinye. Luhlobo olusindisa kakhulu abasebenzi kunye nolukhawulezayo. Umgangatho weenkozo zepepile yomhlaba ungaphezulu kakhulu kohlobo lwencwadana yemigaqo, kwaye ipepile engumgubo ayithandi ukuvela.
Ukuphakama nokukhethwa kwamandla
Ukongeza kwinkangeleko, ubungakanani kunye nomthamo we-grinder ye-pepper nazo zizinto ekufuneka zihlawulwe xa kuthengwa.
Ingakumbi kuhlobo lokujija kwezandla ezibini, ukuba ubungakanani bembiza yepepile bincinci kakhulu, ukubambelela kwezandla zasekhohlo nasekunene kusondele kakhulu kwaye kuya kuba nzima ukufaka amandla. Ngokusisiseko, ukuphakama malunga ne-12cm okanye nangaphezulu kunokuqhutywa ngokulula ngamadoda nabafazi, kodwa ukuba iyasetyenziswa ngabantwana, nokuba luhlobo lwesandla esinye kunokuba nzima ukuluqhuba ngenxa yomahluko wobungakanani. Ungalibali ukujonga ubungakanani besandla somsebenzisi ngaphambi kokuthenga, emva koko ukhethe isitayile esifanelekileyo.
Ukongeza, ubungakanani beepepile onokuthi ulingane nokusila kubalulekile. Ukuba umthamo we grinder mkhulu kakhulu, ukufaka iipepercorns ezininzi kakhulu ngexesha kodwa zingasetyenziswa kwithuba elithile lexesha kunokubangela ukuba ipepile ilahlekelwe livumba layo ngaphambi kokuba uyigaye kwaye uyisebenzise. Ke kuyacetyiswa ukuba ubeke kuphela isixa sepelepele esinokusetyenziswa kwisithuba esimalunga neenyanga ezi-1 ukuya kwezi-3, wandise ukuphindaphindeka kwesongezelelo ukugcina ivumba, kwaye ugcine iipepercorns esele kwindawo epholileyo. Kwangelo xesha, into yokusila ipepile kufuneka igcinwe kude neendawo ezinobushushu obuphezulu ezifana nezitovu zerhasi yendalo ukunqanda ukonakala kweenkozo zepepile.
Ixesha Post: May-24-2021